शिक्षक दरबन्दी मिलानमा हात हाल्नै डराउँछन् पर्वतका स्थानीय तह - News site from Nepal
शिक्षक दरबन्दी मिलानमा हात हाल्नै डराउँछन् पर्वतका स्थानीय तह
पर्वत : पर्वतको कुस्मा नगरपालिका-४ मा रहेको नारायण माध्यमिक विद्यालयका प्रत्येक कोठाहरू विद्यार्थीले भरीभराउ छन्। विद्यालयको एउटै कोठामा ७० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी अटसमटस हुनेगरी बसिरहेका छन्।
शिक्षकहरूलाई पठनपाठनको वातावरण निर्माण गर्न नै कठिन छ। झन्डै ११ सयजना विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा कक्षा १० सम्मको नियुक्ति लिएका शिक्षकहरूको सङ्ख्या २३ छ भने कक्षा ११ र १२ को लागि दिइएको दरबन्दी सङ्ख्या ३ छ। विद्यालयमा एकजना शिक्षकबराबर ४० जना विद्यार्थी पर्छन्।
कुस्मा नगरपालिका ७ मा रहेको युवा वर्ष प्राविमा एकजना शिक्षक बराबर ५ जना विद्यार्थी पर्छन्। कुल ८ जना शिक्षकहरू रहेको विद्यालयमा ३५ जना विद्यार्थी छन्। यो विद्यालयमा गत वर्षकोभन्दा विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको छ। विद्यार्थी सङ्ख्या र शिक्षक दरबन्दी सङ्ख्याको हिसाबले यी दुई विद्यालय प्रतिनिधि मात्र हुन्। जिल्लामा वर्षौँदेखि यही समस्या रहिआएको छ। वर्षौँ पहिलेबाट नै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूले दरबन्दी मिलानको काम गर्ने बताए पनि उनीहरूले यसमा हात हाल्न सकेनन्। सङ्घीयता लागू भएपछि स्थानीय तहहरूले पनि शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्न दरबन्दी मिलान आवश्यक रहेको बताए पनि केहीले बाहेक अझैसम्म हात हाल्ने आँट गर्न सकेका छैनन्।
घाम तापेर बस्छन् कतै शिक्षक कतै विद्यार्थी
कतिपय ऐन र कानुनहरू निर्माण भएको भए पनि केही भने अझै पनि मस्यौदाकै अवस्थामा छन्।
यहीमध्येको एउटा शिक्षा ऐन नआउँदा कतिपय ठाउँमा दरबन्दी मिलानमा समस्या देखिएको छ। शिक्षकहरूको दरबन्दी विद्यार्थीको अनुपातअनुसार मिलाउन नसक्दा कतै शिक्षकले घाम तापेका छन् त कतै विद्यार्थीले। शिक्षा नियमावलीअनुसार पहाडी क्षेत्रमा एउटा कक्षामा ५० जनासम्म विद्यार्थी राख्न सक्ने भनिएको छ। तर विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अनुसार शिक्षकहरूको दरबन्दी नरहेका कारण सबै विद्यार्थीलाई शिक्षाको अवसर दिनको लागि एउटै कक्षामा धेरै विद्यार्थी खाँद्नुपरेको नारायण माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक अम्बिकादेवी लोहनी आचार्यले बताइन्।
‘सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कियो भनेर सबैलाई नारा लगाउन त सजिलो भएको छ, तर दरबन्दी मिलानको काम गर्ने आँट कसैमा रहेन। ’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित निकायमा बस्नेहरूको चाहना नभएको हो कि? कसैले गर्न नदिएर हो ? यही काम मिलाउन नसक्नेले शिक्षामा गुणस्तरीयता रहेन भनेर बोल्न कति उपयुक्त छ ?’ जिल्लाको फलेवास नगरपालिकाले भने केही हदसम्म यो काम गरेको छ। महाशिला गाउँपालिकाले पनि तयारी थालेको प्रवक्ता जीवनविक्रम उचैले बताए। तर जिल्लाको मुख्य पालिका कुस्मा नगरपालिकाले भने दरबन्दी मिलानका लागि कुनै सुरसार नै गरेको छैन।
नगर शिक्षा ऐन पनि पारित गरिसकिएको र विस्तारै दरबन्दी मिलाउने नगरकार्यपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पङ्गेनी बताउँछन्। ‘अब सङ्घीय ऐनहरू पनि आउलान्, प्रदेश कानुन तथा नियमहरू पनि तयार हुन्छन्। अनि हामीलाई पनि काम थाल्न सजिलो हुन्छ।’ उनले भने, ‘हामीले नगरपालिकाको शिक्षा ऐन पनि पारित गरिसकेका छौँ।’ काम सुरु गरिएपछि शिक्षकहरूको कुनै बहानाबाजी नचल्ने र तोकिएको विद्यालयमा जानैपर्ने उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहको हिम्मत छैन
प्रशासकीय अधिकृत पङ्गेनीले नगर शिक्षा ऐन पारित भएको बताइरहँदा नेपाल शिक्षक सङ्घ पर्वतका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले भने शिक्षा ऐन पारित भएको बारेमा आफूहरूलाई थाहा नभएको बताए। दरबन्दी मिलाउन स्थानीय तहहरूमा हिम्मत नै नभएको उनको दाबी छ। ‘नगरपालिकाको शिक्षा ऐन पारित कहिले भएछ? खै हामीलाई त केही पनि थाहा छैन त।’ उनले भने, ‘दरबन्दी मिलान गर्ने हिम्मत कसैको पनि छैन। यो मुद्दा त वर्षौँ पुरानो हो।
समस्या भएको आँखै अगाडि देख्दा पनि चुप छन् सबै।’ शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार एउटा कक्षामा तराईमा ५५, पहाडमा ५० जना र हिमाली क्षेत्रमा ४५ जनासम्म विद्यार्थी हुन सक्ने भनिएको छ। तर स्थानीय तहहरूले शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलानको काम गर्न नसक्दा ऐन नियमावलीहरू खुलेआम लत्त्याइएका छन् भने विद्यार्थीले सजिलो र बुझिने गरी कक्षामा अध्ययन गर्न नपाएको अवस्था छ। दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा माध्यमिक तहसम्म सञ्चालनमा रहेका कतिपय विद्यालय प्राथमिक तहकै शिक्षकहरूको भरमा धानिएको अवस्था छ। जिल्लाका ७ वटा पालिकाहरूमा रहेको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाभरमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थी सङ्ख्या २८ हजार ९ सय ६७ रहेको छ भने शिक्षकहरूको सङ्ख्या १ हजार ९ सय ९२ रहेको छ।
जिल्लाभरमा एक जना शिक्षक बराबर १५ जना विद्यार्थी पर्न आउँछन्। कुस्मा नगरपालिकामा ४ सय ६२ शिक्षक र ७ हजार विद्यार्थी, मोदी गाउँपालिकामा ३ सय २७ शिक्षक र ५ हजार १ सय ५९ विद्यार्थी, जलजला गाउँपालिकामा २ सय ६१ शिक्षक र २ हजार ५ सय ५८ विद्यार्थी, बिहादी गाउँपालिकामा २ सय ६ जना शिक्षक र २ हजार ९ सय विद्यार्थी, महाशिला गाउँपालिकामा १ सय ४७ शिक्षक र २ हजार ७ सय ५० विद्यार्थी, फलेवास नगरपालिकामा ३ सय ८६ शिक्षक र ५ हजार विद्यार्थी तथा पैयुँ गाउँपालिकामा २ सय ३ जना शिक्षक र ३ हजार ६ सय जना विद्यार्थी चालु शैक्षिक सत्रमा कायम रहेका छन्।
पर्वतको गुप्तेश्वर वहुमुखी क्याम्पसमा आगामी भदौदेखि स्नातकोत्तर तहको कक्षा संचालन गरिँदै
पर्वतको फलेवासका दुई सामुदायिक विद्यालयलाई स्कुलबस हस्तान्तरण
पर्वतको मोदी गाउँपालिकाका सवै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गरिने
पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा विद्यार्थी मुल्यांकनको आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी
स्यानीपोखरी प्राथमिक विद्यालयमा प्रअको चरम लापरवाही, अभिवावकले मागे स्पष्टीकरण